Guddoomiyaha Iowa Kim Reynolds wuxuu leeyahay haddii iskuuladu iska indhatiraan amarkooda ah inay | KWIT
Guddoomiyaha Iowa Kim Reynolds wuxuu leeyahay haddii iskuuladu iska indhatiraan amarkooda ah inay
By Halima Osman & Mulki Osman • Aug 4, 2020
Guddoomiyaha Iowa Kim Reynolds wuxuu leeyahay haddii iskuuladu iska indhatiraan amarkooda ah inay bixiso ugu yaraan 50 boqolkiiba wax-barashada qof ahaaneed, waxay ku qasban yihiin inay dhammaystiraan wakhtiga dhammaadka sannadka.
Reynolds wuxuu leeyahay iskuulada way diidi doonaan sharciga.
Sharci la meel-mariyay kalfadhiga sharci dejinta ayaa dhigaya in iskuulada aysan ugu horeyn adeegsan karin barashada casriga ah ilaa gudoomiyuhu uu oggol yahay ku dhawaaqista.
Reynolds wuxuu leeyahay qoysasku waxay dooran karaan barashada casriga ah, laakiin looma oggola degmada oo dhan iyadoo aan laga helin fasax Wasaaradda Waxbarashada.
Toddobo qof oo kale oo qaba COVID-19 ayaa ku dhintay Iowa, waxaana jira 181 kale oo dheeri ah oo la xaqiijiyay, sida ay sheegtay Waaxda Caafimaadka Dadweynaha.
Waxaa jira dhimashada 886 oo leh ku dhawaad nus-80 jir ama ka weyn ama degganeyaal xarumaha daryeelka muddada-dheer.
Saraakiisha caafimaadku waxay soo sheegeen sagaal kiis oo cusub oo COVID-19 ah oo ka dhacay Gobolka Woodbury wadar ahaan 3,656. Websaydhka coronavirus ee gobolka ayaa muujinaya 51 dhimasho mar kale maanta. Saraakiisha Saraakiisha Caafimaadka ee Degmadda Siouxland waxay sheegeen inay ku darsan doonaan dhimashada intaas ka badan warbixintooda berri.
Waaxda Caafimaadka ee Dakota County ayaa maanta soo bandhigtay seddex kiis oo cusub, taas oo tirada ugu badan ee gobolka ka dhigaysa 1,878. Ku dhawaad 27,000 xaaladood oo togan ayaa ku yaal Nebraska iyo 332 dhimasho.
Sharci-dajiyayaasha aagga Waterloo-deegaanka waxay codsanayaan dib-u-eegis kale oo ku saabsan dhaqamada badbaadada goobta shaqada goobta warshaddii hilibka doofaarka ee deegaanka Tyson.
In kabadan kun shaqaale oo ka shaqeeya warshadda Waterloo Tyson ayaa tijaabiyay cudurka 'coronavirus' guga qaarna way dhinteen. Baarayaasha gobolka ayaa go'aamiyay inaysan jirin wax xadgudub ah oo xagga amniga goobta shaqada ah.
Mid ka mid ah sharci dejinta Dimuqraadiga ayaa sheegtay inay cabasho u dirtay maamulayaasha federaalka oo weydiisanaya ra'yi labaad, sababtoo ah waxay maqashay in tallaabooyinka ka hortagga fayrasku ay hoos uga dhici doonaan warshadda Tyson.
Si kastaba ha noqotee, waxay ku dhiirrigelisay qorshaha cusub ee Tyson uu ku dhawaaqay inuu shaqaaleysiin doono shaqaale badan oo adeegyo caafimaad ah uuna sameeyo tijaabooyin joogto ah ee shaqaalaha.
Saraakiisha Tyson waxay diidaan codsiyada ay siisay Siouxland Public Media in ay ku muujiso tirada shaqaalaha u dhintey dhibaatooyin la xiriira COVID-19 oo ka dhacay xarumaha Dakota City ama Storm Lake.
Tirada dhimashada Gobolka Woodbury sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19 ayaa hadda gaaraya 50
By Halima Osman • Aug 3, 2020
Tirada dhimashada Gobolka Woodbury sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19 ayaa hadda gaaraya 50, sida laga soo xigtay Caafimaadka Degmada Siouxland. Waaxda caafimaadka ayaa sheegtay in labada qof ee dhimatay ay ahayd haweeney da 'dhexaad ah oo da’doodu u dhaxayso 41 illaa 60 iyo nin da ’weyn oo da’doodu u dhaxayso 61 illaa 80 sano jir.
Si kastaba ha noqotee, websaydhka 'coronavirus' ee gobolka ayaa muujiyay dhimasho kale oo wadarta guud ee 51 ee Gobolka Woodbury.
Coronavirus-ku wuxuu ku sii faafayaa Iowa
By Halima Osman • Jul 31, 2020
Coronavirus-ku wuxuu ku sii faafayaa Iowa. 11 qof oo kale oo qaba COVID-19 ayaa dhintey, waxaana jira ku dhawaad 705 kiis oo dheeri ah oo la xaqiijiyay, gobolka ayaa wariyey Jimcihii, sida uu sheegayo websaydhka Coronavirus.Iowa.gov. Waxaa jiray dhimashada 865. Degmooyinka Polk iyo Woodbury waxay sii wadaan inay haystaan tirada ugu badan ee fayraska.
Iowa Gov. Kim Reynolds ayaa sheegay subaxnimadii isagoo sheegay in iskuulada Iowa ay tahay inay
By Halima Osman • Jul 30, 2020
Iowa Gov. Kim Reynolds ayaa sheegay subaxnimadii isagoo sheegay in iskuulada Iowa ay tahay inay arkaan heerka coronavirus ugu yaraan 15% gobolka ay ku yaalliin ka hor inta aysan codsan inay u wareegaan dhismo dugsi ama degmo si ay si buuxda ugu bartaan internetka.
Tilmaanta laga helo waaxda caafimaadka dadweynaha ee Iowa iyo waaxda waxbarashada ee Iowa waxaa ku jira afar heerar oo ah isu-gudbinta bulshada ee COVID-19 dugsi gudaheeda, oo u baahan tallaabooyin wax ku ool ah oo sii kordheysa iyadoo gudbinta ay kordhayso.